Gabadh Soomaaliyeed oo guul ka gaartay Cilmiga Badda - BBC News Somali
Gabadh Soomaaliyeed oo guul ka gaartay Cilmiga Badda
14 Luulyo 2019
Cilmiga badda waxaa uu ka mid yahay culuumta ay aadka ugu yartahay barashadiisu bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna dumarka.
Qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa u arka in Cilmiga badda uu yahay mid howshiisa ay ka soo bixi karaan oo kaliya ragga oo ay dumarka ku adagtahay.
Balse Khadra Cabdi Axmed waa gabadh Soomaaliyeed oo baratay culuumta badda islamarkaana imika ka shaqeeysa wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya.
Khadra ayaa magaalada Muqdisho timid horaantii sanadkii 2015-kii iyada oo xiligaas ka shaqo bilowday wasaaradda gaadiidka iyo badda waxaana ay ogaatay mudadii ay shaqeeynaysay in jirto fursad waxbarsho oo ah cilmiga badda isla markaana loo aadayo dibadda.
Inkastoo Cilmiga badaha Soomaalidu xilliyadii hore u aadi jireen wadamada dibadda hadana Khadra ayaa fursadaan ka heshay sanadkii 2017-kii jamacad ku taala magaalada Maalmo ee dalka Sweden halkaas oo ay ka baratay cilmiga badda ee ay hadda ku shaqeeynayso
Sanadkii 2018-kii bishii Nuveember ayey Khadro ka qalin jabisay jaamacadda Maalmo .
"Deeqdaan waa mid mar walba suurta gal ah wadamadana la siiyo balse waxyaabaha qofka looga baahanyahay ama qofka lagu xidho ayaa adag oo badanaa aan suurta gal aheyn iminka qof Soomaaliya jooga ama saldhigiisu Soomaaliya yahay in uu dhameystiro shuruudaha looga baahanyahay ayay tiri Khadro.
Haween Soomaaliyeed oo masaafo dheer u soo galay si ay u caawiyaan haweenka dalkooda hooyo
Xeebihii burad badeeda oo howla kale ay ka socdaan
Adiga oo Mareykan jooga beeraley ma noqon lahayd?
Mar BBC-du khadro waydiisay waxa ay ku doortay cilmigaan ayaa waxaa ay ku jawaabtay .
" Hadii aan ogaan lahaa Cilmigaan sida uu faa'idada uu leeyahay ama uu horey uga jiri lahaa wadankeena waan diyaarin lahaa laakin jaamacadaha wadankeena oo aan manhanjkeena ku darin cilmiga badda Ayaan ii suurta gelin in aan dhigto waxaa taqasusukeeygu ahaa AMA "
Sida ay khadro sheegtay dadka qaar ayaa baraha bulshada ku daabcay qoraallo sheegay in ay qaxooti aheed hase yeeshee khadra ayaa beenisay waxaana ay sheegaty in deeq waxbarasho ay dibadda ku aadday haatana ay dalkeeda hooyo ku soo laabatay.
Sababta ay ku doortay Cilmiga Badda
Khadaro ayaa sheegtay in sababaha ay cilmigaan ku doortay ay ka mid tahay in Soomaaliya ay leedahay bad dhirirkeedu yahay 3,333 kiiloomitir isla markaana uu ceegaago khayraad uu kaluunku ka mid yahay oo sidii looga faa'iidaysan laha khayrdkaas iyo furda ay heshay ay ka caawisay in ay ku dhiirto barashada cilmigaan.
Khadro ayaa hadda ku dhiira gelinaysa bulshada in ay bartaan cilmigaan badaha oo ay sheegtay in dunida uu muhiim ka yahay iyadoo intasa ku dartay in qof kasta oo Soomaali ah uuu ka faa'iideysan karo.
Waa in aan Dumarka ku dhiiro gelinaa cilmiga iyo in ay badda galaan, muranada baddana waxaa keenaya waa khayraadka waana waxaan la qabno bulshada caalamka ayey tiri Khadaro.